> Resource > Mac > Kan sameeyey Movie u Mac: Sida loo sameeyo Movie ah ee Mac
Haddii aad rabto inaad la wadaagto ururinta sawiro iyo videos on your Mac dadka kale, waxaan iyaga ka dhigi galay filim shakhsi. In kasta oo aad qabto iMovie, waxaad ka heli kartaa waa adag tahay in la isticmaalo. Waa hagaag, si ay adiga kuugu filim ee Mac si fudud oo si deg deg ah, waxaan ku talinaynaa gaare kale movie u Mac - Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) . Software Tani waxay aad u saamaxaaya in ay abuuraan filimada caadadii la sawiro, muusig iyo saamaynta. Waxaad markaa ka daawan kartaa filim ku on your computer, email saaxiibada ama xubnaha qoyska, boostada goob goobaha bulshada ama ku gubi in DVD ah. Hadda hubi tallaabooyinka hoose si aad u aragto sida loo sameeyo filim ee Mac. Hubi tutorial video ku saabsan sida loo edit videos on Mac hore oo kale.
1 files video / sawir / music Import barnaamijka
Ku rakib oo ay maamulaan Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac). Markaas riix "File"> "Add Files" ama si toos ah jiidi jeedi video, sawirka ama music files si xawli caadi u dhiganta. Waxaad kaloo isticmaali kartaa browser warbaahinta ah in files ka Lugood maktabadda, iMovie, ECT heli .. Or si toos ah jiidi oo hoos u files barnaamijka. Cajalad fiidiyoow ah ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa iMovie. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa qalabka video qabashada ama iSight dhisay-in.
2 Bilow samaynta aad movie
Hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay u qaadato filimka heerka ku xiga ay ku daray personalizing oo gaar ah ahu taabtana nijaas, sida Intro / credit, kala guurka iyo saamaynta.
Intro / credit: sida aad u aragto in tiyaatarada filimada iyo DVD-yada, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ku darto Intro bilowga ah ee aad movie u sheegaya dadka in yar oo ku saabsan filimada, iyo dar credits dhamaadka inaad u sheegto dunida ee abuuray iyo la yaab leh waxa ku jira. Si tan loo sameeyo, kaliya u baddashaan Intro / tab Credit iyo jiidi saamaynta meeshii aad rabto in aad u muuqan. Ka dibna riix double oo taga si "Title" in ay galaan erayada ama la beddelo, Font size iyo Color of qoraalka.
Guurka: Waxa kale oo aad ku dari kartaa kala guurka oo u dhexeeya video iyo maqal ah clips si aad filim xirfad dheeraad ah. Just tagaan oo ay u tab-guurka iyo dooran ka 60+ saamaynta guurka.
Raadka: daro saamayn gaar ah u videos iyo sawiro ku storyboard ka dhigi doonaa filim gooyeen. Si aad ku dari saamaynta, riix "Power Tool" button in bar qalab si aad u codsato saamayn sida Janjeeri-Shift, Muuse iyo Toos off.
3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo wadaagno movie
Marka aad samaysay, badbaadiyo movie gaar ah iyo kuwa kale la wadaago. In sidaa la yeelo, ku dhacay "Dhoofinta" oo loo doorto dariiqada wax soo saarka ah. Si laguugu sahlo, waxa aad si toos ah u gali kartaa bandhigyada aad u YouTube ama Facebook, gubi in DVD, ama daawado on iPod, iPhone, iPad iyo qalabka kale mobile.